OPPO Find X2 မှာ ဘာတွေ ထူးခြားနေပြီလဲ? - PX
၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ ကျင်းပသွားတော့မယ့် MWC 2020 (Mobile World Congress) ပွဲမှာ Brand ပေါင်းစုံက နည်းပညာသစ် ဒါမှမဟုတ် Industrial Leading စမတ်ဖုန်းတွေ မိတ်ဆက်လာတော့မယ်။
Samsung ကတော့ MWC တောင် မစောင့်တော့ဘဲ ၁ ပတ်စောပြီး Galaxy S20 စီးရီးကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ကြေညာမယ်။ HUAWEI လည်း သီးသန့်တစ်ပွဲနွဲဖို့ စီစဥ်ထားဟန်ရှိတဲ့အတွက် MWC မှာ စောင့်ကြည့်စရာ OnePlus နဲ့ OPPO (ဦးစားပေး) ပဲ ရှိပါတယ်။
Xiaomi ၊ LG နဲ့ Sony တို့လည်း ဝင်နွဲမှာ ဖြစ်ပေမယ့် Mi 10 ၊ Mi 10 Pro ဖုန်းတွေက လွဲရင် စိတ်ဝင်စားမယ် မထင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့လည်း Galaxy S20 ၊ OnePlus 8 နဲ့ HUAWEI P40 တွေ အကြောင်း တင်ဆက်ထားပြီဆိုတော့ OPPO ရဲ့ Revolutionary ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Find X2 ကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Find X တုန်းက Bezel-less Display ၊ FullView Display နဲ့ ကြွရွနေတဲ့ ဒီဇီုင်းကို ကြွေခဲ့မယ် ထင်ပါတယ်။ မြင်တာနဲ့တင် မက်လောက်စရာ ဖြစ်ခဲ့သလိုပဲ Find X2 ကိုလည်း Premium Design နဲ့ ဝင့်ဝင့်ထည်ထည်ကို ကြွားဦးမှာပါ။
Find X (image credit: Whoop to Us)
အစောပိုင်း Leak တွေမှာတုန်းက Under Display Camera သုံးထားမယ်လို့ ပြောထားတဲ့အတွက် FullView နဲ့ မြင်ရဦးမယ်။ ဒါပေမယ့် နည်းပညာ အခက်ခဲကြောင့် ထင်ပါတယ်။
OPPO ကိုယ်တိုင် မသုံးဘူး ကြေညာလိုက်တဲ့အတွက် Find X နဲ့ ကွဲထွက်လာပြီး Galaxy S20 နဲ့ OnePlus 8 ပုံစံ အလယ်မှာ ပါဝင်လာမယ့် Punch-Hole Notch နဲ့ ဖြစ်သွားပါတယ် (ဒါဆိုရင် Motorized Pop-up Selfie Camera မသုံးတော့တာနဲ့ အတူတူပဲလို့ သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်)
Find X2 နဲ့ ပတ်သက်လို့ အသေချာ ပြောထားနိုင်တာက OLED Display ဖြစ်ပြီး ကောလာဟလတွေအရ 120Hz Refresh Rate ထောက်ပံ့လာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ Resolution အနေနဲ့ 1440 x 3168 ရှိမယ့်အပြင် DCI-P3 100% ၊ HDR10 Certified DIsplay ဖြစ်လာမယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် Find X2 ဟာ Display Quality ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ Weight မလျှော့ထားပေမယ့် S20 ၊ OnePlus 8 တို့နဲ့ စကားပြောနေတာ Display Size တစ်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Find X2 မှာ 6.5” AMOLED Display သုံးထားမှာဖြစ်ပြီး Samsung ၊ OnePlus တို့နဲ့ယှဥ်ရင် 0.2 – 0.4” လောက် ကွာခြားမှု ရှိပါတယ်။
Find X2 ရဲ့ OLED Panel ဟာ 80° Curvature မျက်နှာပြင်ခုံးဖြစ်ပြီး အသုံးပြုလာမယ့် MEMC Chip အရ 10-bit Color Depth ကို ထောက်ပံ့လာမယ်၊ 4096 Brightnesss Levels ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး 120Hz Refresh Rate ပါဝါသုံးစွဲမှုကို ချွေတာနိုင်မယ့် M1 Co-processor ပါဝင်လာမယ်လို့ သိထားရပါတယ်။
တစ်ခုရှိတာက Find X2 မှာ ပါဝင်လာတဲ့ Co-processor ရဲ့ Power Saving လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ဘယ်လို အနေထားရှိမလဲ မသိရသေးတဲ့အတွက် WQHD+ Resolution မှာ 120Hz နဲ့ Run မလား ပြောရခက်ပါသေးတယ်။
2020 Flagship ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် အပြည့်စုံဆုံး Combination ကတော့ Snapdragon 865 Processor ကို 8GB ဒါမှမဟုတ် 12GB RAM နဲ့တွဲပြီး အနည်းဆုံး 256GB Storage နဲ့ ထုတ်ပစ်ဖို့ပါပဲ။
Find X2 ဟာလည်း Counterpart ဖုန်းတွေဖြစ်လာမယ့် OnePlus 8 နဲ့ Galaxy S20 တွေနဲ့ ပြိုင်ဖို့ Snapdragon 865 သုံးလာမယ့်အပြင် Android Q ကိုမှ ColorOS7နဲ့ ပေါင်းဖက် ထားဦးမှာပါ။
Cameras (All Sony Sensors)
ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် ဒုတိယ အရေးကြီးတာ ကင်မရာဆိုတော့ Find X2 မှာ ဘယ်နှစ်လုံးပါမယ်ထင်လဲ? S20 စီးရီးတွေမှာ Quad Camera သုံးလာမယ့်အပြင် OnePlus 8 စီးရီးမှာ Triple Camera Setup နဲ့ မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ဒီလိုဆိုတော့ P40 မပါဘဲ ပြောရရင် Find X2 မှာ 48MP Sensor f/1.8 (IMX 689) နဲ့ Telephoto Lens တစ်လုံး ၊ Ultra-wide Lens တစ်လုံးဆိုပြီး Triple Camera Setup နဲ့ မြင်ရနိုင်ပါတယ်။
လတ်တလော ပေါက်ကြားထားသလောက် ပြောရရင် 13MP f/2.4 နဲ့ IMX 708 Ultra-wide Lens တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 5x ဒါမှမဟုတ် 10x Optical Zoom ပါဝင်လာမယ့်အချက်ကို သေချာ မသိရသေးပဲ အခုဖော်ပြထားတဲ့ အချက်လက်တွေဟာ အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။
image credit Pandaily
48MP Main Sensor ကတော့ အရွယ်စား 1/1.3″ ရှိတဲ့အတွက် Mate 30 မှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ IMX 600 Sensor အရွယ်စား 1/1.75″ ထက် ပိုကြီးပြီး ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး “All Pixel Omnidirectional Focusing” နည်းပညာသစ် သုံးလာမယ်လို့ သိထားရပါတယ်။
နောက်တစ်ချက် ပြောနိုင်သေးတာက Selfie ကင်မရာ အတွက်အသုံးပြုလာမယ့် Lens ဟာ Ultra-wide ရိုက်ကူးလာနိုင်ပြီး IMX 616 32MP Selfie Camera ဖြစ်မယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။
လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အနေနဲ့ကတော့ Reno2 စီးရီးမှာ မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ Video Zoom Feature ပိုကောင်းလာမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပြီး EIS လုပ်ဆောင်ချက်ဟာလည်း Find X2 မှာ ပိုမိုက်လာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
OPPO အနေနဲ့ 30W Wireless VOOC Flash Charge ၊ VOOC Flash Charge 4.0 နည်းပညာသစ်တွေကို ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာမှာ မိတ်ဆက်သွားတဲ့အတိုင်း 65W Speed နဲ့ အားအမြန်သွင်းနိုင်မယ့် SuperVOOC 2.0 နည်းပညာသစ်နဲ့ Find X2 မှ မြင်ရနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုလာမယ့် ဘက်ထရီနဲ့ ပတ်သက်လို့က Find X ထက် မဆိုစလောက်ပိုများပြီး 3,900 mAh Lithium Polymer Battery ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။
UFS 3.1 & LPDDR5 RAM (May Be)
စမတ်ဖုန်း Storage နည်းပညာအတွက် JEDEC ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ UFS 3.1 ကို Find X2 နဲ့ မြင်ရနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကို OnePlus 8 နဲ့ S20 စီးရီးတွေမှာလည်း အသုံးပြုလာမယ်လို့ သုံးသပ်ထားပြီး အားသာချက်တချို့ တင်ပြရရင် UFS 3.1 မှာ
Write Speed ပိုမြန်လာမယ်
DeepSleep ကြောင့် ပါဝါစား ပိုသက်သာလာမယ်
Performance Throttling ဖြစ်ရင် အသိပေးမယ့် Notifcation Feature ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Industrial Leading နည်းပညာကို Flagship Android ဖုန်းတွေမှာ သုံးလာမှာပါ။
ဒါဆိုရင် Find X2 ဟာ ပြိုင်ဖက်တွေအကြား ပေါ်လွင်နေဖို့ ကင်မရာ လုပ်ဆောင်ချက် ဒါမှမဟုတ် တခြား Leading နည်းပညာတစ်ခုခုနဲ့ Find X တုန်းကလို ထင်ပေါ်နေအောင် လုပ်ပြဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
အခု တင်ပြထားသလောက် အချက်လက်တွေက ကောလာဟလတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် OPPO အနေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ရှားမလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းဖို့ စောနေသေးပါတယ်။ လက်ရှိ စမတ်ဖုန်း Trend ကိုက Display ၊ Performance နဲ့ Camera ဖြစ်နေတဲ့အတွက် Flagship ဖုန်းတွေကလည်း ဒီဘောင်ထဲက မထွက်နိုင်ကြပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်လို့ရတာက Breakthorugh ဖြစ်လာမယ့် နည်းပညာကို OPPO Find X2 မှာ မြင်ရနိုင်မလား? နောက်တစ်ချက်က Price to Performance ချိန်ခွင်ကို ဘယ်လိုကစားသွားမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
MWC ကလည်း မကြာခင်လာတော့မှာဆိုတော့ စာဖတ်သူတွေ အမြင် ဘယ်လိုရှိလဲ? S20 ၊ OnePlus 8 နဲ့ Find X2 ၊ HUAWEI P40 တွေ အကြောင်း ဖော်ပြထားပြီးပြီဆိုတော့ ထင်မြင်တာလေးတွေ သုံးသပ်ကြည့်ပါဦး။
Source: Gadgets Now ၊ GSMArena
ပိုမိုသက်သာစွာ သုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ Mytel ရဲ့ Data Roaming Plan အသစ်